ရေတစ်နေ့ကို ၁ လီတာဘာကြောင့် သောက်ခိုင်းကြတာလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Health » ရေတစ်နေ့ကို ၁ လီတာဘာကြောင့် သောက်ခိုင်းကြတာလဲ?
ရေတစ်နေ့ကို ၁ လီတာဘာကြောင့် သောက်ခိုင်းကြတာလဲ?
Min Thuta | Health | January 12, 2020
ကိုယ့်နဲ့သိတဲ့မိတ်ဆွေတွေ လူကြီးမိဘတွေက ရေတစ်နေ့ကို ငှက်ပျောဘူး တစ်ဗူး (၁ လီတာ) သောက်ဖို့ ဘာကြောင့် ပြောဆို အကြံပေးကြလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေမသောက်ပဲမရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်တက်ကြွလန်း ဆန်းနေဖို့အတွက် ရေများများသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေများများသောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကား ကိုတော့ကြားနေကျဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကရေကိုလိုအပ်တာလဲ ဘာကြောင့်ရေများ များ
အပြုံးလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းခြင်းနည်းလမ်းအချို့
by Min Thuta on December 1, 2019 -0Comments
ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပြုံးလိုက်တိုင်းမှာ လှပတဲ့ အပြုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်... &...
ဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိတဲ့ Fast Food များ
by Min Thuta on November 7, 2019 -0Comments
သင်ဟာ Fast Food တွေစားရတာနှစ်သက်သူလား? ဒါဆိုရင်တော့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေရှိတယ်နော်... ယနေ့ခေတ်မှာ Fast Food တွေပေါများလာပြီး စားသုံးသူတွေအန...
by Min Thuta on November 17, 2019 -0Comments
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငလျင်လှုပ်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲရက်ပိ...
အသားရည် ထိန်းသိမ်းနိုင်စေမယ့် အချက်များ
မိတ်ဆွေ သင့်မှာ အသားအရည် နဲ့ အရေပြား နဲ့ပက်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရပါက ဖြေရှင်းပေးဖို့ နည်းလမ်းအချို့ကိုမျှဝေပေးလိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင် လူတိုင်း...
Beach Trip ထွက်မယ် ဘာတွေ မဖြစ်မနေယူသွားသင့်လဲ?
by Min Thuta on November 5, 2019 -0Comments
အားလပ်ရက်ရှည်တွေ ရှိတဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ Beach Trip ထွက်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ Beach Trip သွားရင် မဖ...
All times are GMT 6.5. The time now is 7:41 am.